Uholelwe wuthando lwezokwelapha ocubungula amagciwane
UDKT Nokukhanya Msomi osephethe isikhungo esicwaninga ngamagciwane ngaphansi kophiko olucwaninga ngezifo nemithi yokwelapha e-UKZN, iLaboratory Medicine and Medical Sciences. Isithombe: Sithunyelwe
PHILI MJOLI | February 6, 2020
UKUBA wudokotela ocubungula ngamagciwane ungahlangani neziguli nakho kuwukwelapha, umehluko ukuthi awuhlangani neziguli kodwa ulwazi olusiza ekutheni iziguli zelashwe ngempulelelo luqhamuka kubo labo dokotela.
Lokhu kushiwo uDkt Nokukhaya Msomi, uMaMdlalose (43) osanda kuqokelwa esikhundleni sokuphatha isikhungo esicwaninga ngamagciwane, iVirology olungaphansi kophiko olucwaninga izifo nesayensi yemithi, iSchool of Laboratory Medicine and Medical Sciences eNyuvesi yaKwaZulu-Natal (UKZN).
UDkt Msomi oqale ngenyanga edlule ukuphatha lesi sikhungo, uthe uke waba ngudokotela ozimele iminyaka eyisishiyagalombili ngesikhathi iziguli zakhe zinezifo eziqala emuva kokuthi isiguli singenwe yigciwane elithile.
“Ngigcine sengiba nesifiso sokuthi ngike ngicwaninge ngawo amagciwane ngenziwa ukuthi bengibona izifo eziphatha iziguli ebengizelapha.
“Ngashiya phansi ukuzimela ngalandela lokho okwakufiswa yinhliziyo yami.
“Kulolu phiko sicwaninga ngamagciwane amaningi awo okukhona negciwane lengculazi,” kusho uDkt Msomi.
Uthe uqale ukusebenza kulolu phiko ngo-2012 njengoba eseqokelwe ekutheni abe yinhloko yalo engeze izinhlelo zokucwaninga ngoba ukholwa ukuthi luyasiza ekutheni kwaziwe ukuthi izifo zilawulwa kanjani.
UDkt Msomi akalona ivukana emkhakheni wokucwaninga njengoba eke waba yingxenye yabacwaningi ababhalwe emiqingweni yocwaningo lwezesayensi.
Phambilini uke wacwaninga ngeHepatitis ngenhloso yokuthi kube lula ukuthi kutholwe lesi sifo.
Le ntokazi edabuka eMlaza yaphothula izifundo zayo zeBsc eNyuvesi yaKwaZulu-Natal ngo-1998, yasebenza ezikhungweni zezempilo zikahulumeni kuzo okubalwa isibhedlela iChrist the King, eseXobho nasemtholampilo waKwaDabeka ngaphambi kokuthi ithathe isinqumo sokuzimela.
“Angikaze ngifise ukungena komunye umkhakha ngaphandle kowobudokotela kodwa ngiqale ngaba wudokotela owelapha umndeni esikhungweni sikahulumeni, ngase ngiyazimela. Ngesikhathi ngizimele, ngibone olunye uhlangothi ngezifo okungukuhlaselwa ngamagciwane bese kuvela leso sifo isiguli esifika kudokotela siphethwe yiso.
“Ngabe sengiba nesifiso sokuthi ngibuyele edeskini ngiyofunda kabanzi,” kusho uDkt Msomi.
UDkt Msomi ubuyele edeskini ngo-2009.
Phakathi kweziqu anazo iDiploma ezifundweni zokulawula igciwane lengculazi, iHIV Management, iPathology nezifundo zokucwaninga ngegciwane, i-MMed Pathology (Virology).
Uthola uxhaso kwiNational Research Foundation futhi uke wahlomula kwiWelcome Trust Scholarship ngesikhathi efunda eSanger Institute, eseCambridge, e-United Kingdom.
Ubuye abe yingxenye yekomiti lakuleli elingaphansi kweWorld Health Organisation (WHO), eliqokwe umnyango wezempilo kuleli ukuthi libhekane nezinhlelo zokuqeda isifo sovendle.
Njengamanje wenza iPhD, ucwaningo alwenzayo lubheke ukushintshashintsha kwesifo iHepatatis B.